IVA စမ်းသပ်ခြင်း ကျွန်ုပ်၏ကားတင်သွင်းမှု
ကမ္ဘာတစ်လွှားယာဉ်တင်သွင်းသူများ သွင်းကုန်ကျွမ်းကျင်သူ အပြည့်အဝ IVA စမ်းသပ်ခြင်း သင်၏ကားသည်ယူကေတွင်အပြည့်အ ၀ လိုက်ဖက်လိမ့်မည် အတွေ့အကြုံ၏ 30 နှစ်များ အသိပညာ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ထိရောက်သော။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက် IVA စစ်ဆေးမှုအချိန်ဇယားကိုစီမံသည်
အစိုးရစောင့်ဆိုင်းနေသည့်အချိန်မရှိပါ - ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဖြစ်ပြီးသင်၏ IVA အတွက်သင်၏မော်တော်ယာဉ်ကိုအခြားနေရာများထက်ပိုမိုလျှင်မြန်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ပိုင်အဆောက်အအုံများကိုပိုင်ဆိုင်ပြီး DVSA နှင့်ဆက်သွယ်သည့်အခါဖော်ပြခဲ့ပြီးသောအကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည်။ မော်တော်ယာဉ်များတင်သွင်းခြင်းအတွက်ယူကေနိုင်ငံ၏ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်သူများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယာဉ်များကိုစစ်ဆေးရန်စွမ်းရည်ကိုရရှိထားသည်။
ဆိုလိုသည်မှာစာမေးပွဲဖြစ်ရန်သင်၏ကားသည်အစိုးရတည်နေရာသို့ဘယ်တော့မျှထွက်ခွာသွားမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ယ်ယူသူများအားဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးနိုင်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူပါသည်။
သင်၏ပတ် ၀ န်းကျင် IVA စာမေးပွဲနှင့် ပတ်သတ်၍ ပြshouldနာပေါ်လာပါကအပတ်တိုင်းကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့်နေရာများနှင့်သင်ပိုမိုမြန်ဆန်သောအလှည့်အပြောင်းကိုမျှော်လင့်နိုင်သည်။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ဤကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးနိုင်သောအခြားကုမ္ပဏီမရှိပါ။
တစ် ဦး ချင်းယာဉ်အတည်ပြုချက်ကဘာလဲ?
IVA သည်တစ် ဦး ချင်းမော်တော်ယာဉ်ခွင့်ပြုချက်ကိုဆိုလိုသည်။ ယူကေရှိယာဉ်အမျိုးအစားများကိုအတည်ပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည်။ Type Approval ဆိုသည်မှာမော်တော်ယာဉ်များ၊ ၎င်းတို့၏စနစ်များနှင့်အစိတ်အပိုင်းများသည် UK နှင့်ဥရောပတွင်အသုံးပြုရန်သင့်လျော်သောပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်လုံခြုံရေးစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီစေရန်သေချာစေသည်။
သင်၏မော်တော်ယာဉ်ကိုယူကေတွင်မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက်၎င်းတွင်အမျိုးအစားခွင့်ပြုချက်ပုံစံရှိကြောင်းပြရမည်။ သင်၏လက်လီလက်ကားအရောင်းအဝယ်၌မှန်ကန်သောလက်မောင်းမောင်းယာဉ်အသစ်များကိုထုတ်လုပ်သူမှထုတ်လုပ်သောအမျိုးအစား - အတည်ပြုချက်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်းအတည်ပြုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အီးယူပြင်ပမှတင်သွင်းသောမော်တော်ယာဉ်များရှိခြင်းသို့မဟုတ်လက်ဝဲမောင်းမောင်းယာဉ်များရှိသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကျွနု်ပ်တို့၏ယာဉ်ကိုမှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သောခွင့်ပြုချက်ရရှိရန် IVA စမ်းသပ်မှုကိုသုံးနိုင်သည်။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်မော်တော်ယာဉ်အားလုံးသည်မော်တော်ယာဉ်သည် 'ထိုက်တန်သောလမ်း' နှင့်လုံခြုံသည်ဟုသက်သေပြရန် MOT လိုအပ်သည်။ သို့သော် IVA စမ်းသပ်မှုသည်ကွဲပြားသောရှုထောင့်မှကြည့်သည်။ မော်တော်ယာဉ်၏အလွန်ဒီဇိုင်းသည်အီးယူအနှံ့ရှိစည်းမျဉ်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်သေချာအောင်လုပ်ထားသည်။
ဥရောပ၌ COC သည်ထုတ်လုပ်မှုမပြုခဲ့ပါ၊ ဆယ်နှစ်မပြည့်ပါကမော်တော်ယာဉ်သည် IVA စစ်ဆေးမှုလိုအပ်သည်။ အီးယူတွင် CoC သည်ယာဉ်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်းသက်သေပြနိုင်သောကြောင့်၊ အီးယူထုတ်လုပ်မော်တော်ယာဉ်များ COC မရရှိမဟုတ်လျှင်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်
IVA စစ်ဆေးမှုကို Driver နှင့် Vehicle Standards Agency မှ DVSA စစ်ဆေးရေးစခန်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကဲ့သို့သောသတ်မှတ်ထားသောအဆောက်အအုံတစ်ခုတွင်ပြုလုပ်သည်။ DVSA ၀ န်ထမ်းများသည်တစ်ပတ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ site သို့လာရောက်လည်ပတ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ IVA နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး နှင့်အတူလိုက်ပါလာသောကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏မော်တော်ယာဉ်များကိုစစ်ဆေးသည်။ သင်၏ယာဉ်ကိုစမ်းသပ်မှုတွင်တင်ပြရန်အတွေ့အကြုံရှိသောပညာရှင်ရှိခြင်းသည်သင်ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးရန်အတွက်ကားကိုတင်ဆက်ခြင်းထက်ကြီးမားသောအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ယာဉ်၏အစိတ်အပိုင်းအချို့ကိုတိဘောင်ပြားများနောက်ကွယ်တွင်သို့မဟုတ်အင်ဂျင်၏နေရာများသို့ရောက်ရှိရန်ခက်ခဲသောစာမေးပွဲစစ်ဆေးသူအားသင်မကြာခဏပြသရန်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည် ပင်လယ်အော်။ ကျေနပ်ပြီးတာနဲ့သူတို့ကငါတို့ကားကိုမှတ်ပုံတင်ဖို့သုံးတဲ့ IVA pass Certificate ကိုထုတ်ပေးတယ် DVLA.
သင်၏မော်တော်ယာဉ်သည်အင်္ဂလန်အမျိုးအစားခွင့်ပြုချက်ရရှိရန်အတွက်အဆင့်မြှင့်မှုအချို့လိုအပ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာပညာရှင်များသည်သင်၏မော်တော်ယာဉ်ကို IVA စံနှုန်းသို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်အတွေ့အကြုံရှိသည်။
သင်၏လျှောက်လွှာတွင်ပါ ၀ င်သောစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကို VOSA ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အဆက်အသွယ်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုင်တွယ်လိမ့်မည်။ သို့မှသာစာရွက်စာတမ်းများကိုမှန်ကန်စွာမဖော်ပြနိုင်အောင်အချိန်နှင့်တပြေးညီတင်ပို့မည်။